ओली र प्रचण्ड गोरखा पसेपछि बाबुरामलाई ‘प्रेसर’ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
ओली र प्रचण्ड गोरखा पसेपछि बाबुरामलाई ‘प्रेसर’
२९ कात्तिक, गोरखा । पहिलो चरणको चुनावको तिथि नजिकिँदै जाँदा उम्मदेवारहरु मतदाताका घरदैलो चाहारिरहेका छन् । किसानहरु मंसिरे बाली उठाउन तल्लीन छन् । मतदाताहरु नेताले बोलाएका सभा समारोहमा खासै निस्किएका छैनन् । तर, बुधबार गोरखामा केपी ओली र प्रचण्ड सम्मिलित चुनावी कार्यक्रममा भने मतदाताको जनउभार देखिएको छ ।
विगत ०४८ सालको आम चुनावमा नेताहरु खासै मतदाताको घरघरमा जानुपरेन, विभिन्न ठाउँमा हुने सभामै जनता आफैं उर्लिएर आए । तर, पछिल्ला निर्वाचनहरुमा भने नेताहरु नै जनताका घरघरमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
र, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि नेताहरु नै जनताको घर दैलोसम्म लठ्ठी टेकेर दौडिइरहेका छन् ।
उम्मदेवारले घरदैलोमा सास्ती व्यहोरिरहेकै बेला बुधबार दिउँसो गोरखाको भच्चेक बजारमा आयोजित नारायणकाजी श्रेष्ठको चुनाव प्रचार अभियानलाई केपी ओली र प्रचण्डले संयुक्तरुपमा सम्वोधन गरे ।
पहाडी जिल्लामा आयोजित यो सभामा विभिन्न गाउँबाट मतदाताहरुको ठूलै भीड जम्मा भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय ओली र प्रचण्डको भाषण सुन्न भेला भएको यो जमघटले गोरखामा अब दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै नभएर जनतालाई सोत राम्रैसँग चुनाव लागेको संकेत दिएको छ ।
दशकौं पछि हुन लागेको आम चुनावमा विस्तारै मतदाताहरु राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा घरबाहिर निस्कन थालेको महसुस गोरखाले गराएको छ ।
बाबुराम भट्टराईमाथि ‘प्रेसर’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिताउन भन्दै गोरखा पसेपछि अब नयाँ शक्ति पार्टीका उम्मेदवार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दबावमा परेका छन् ।
कांग्रेससँग तालमेल गरेर चुनाव लडिरहेका डा. भट्टराईले अहिलेसम्म गाउँ र टोलमा स-साना कोणसभाहरु गरिरहेका छन् । उनले कुनै ठूलो जनलहरयुक्त आमसभा गरेका छैनन् ।
एमालेसँगको तालमेलका आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादी नेता नारायणकाजीको पक्षमा एक प्रकारको जनलहर देखिएपछि अब बाबुराम भट्टराईले पनि त्यस्तै शक्ति प्रदर्शन गर्लान् या नगर्लान् हेर्न बाँकी छ ।
गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा बाबुरामले नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर चुनाव लड्दैछन् भने नारायणकाजीले एमालेको साथ लिएका छन् । दुबै ‘हेभीवेट’ नेताहरु चुनावी मैदानमा रहेकाले यहाँको चुनावले देशव्यापी चासो र चर्चा पाएको छ ।